बुटवलमा चक्रपथ निर्माण: बुद्धबल्लीका क्षेत्र हुँदै लुम्बिनी र विमानस्थलसम्म सडक सञ्जाल जोडिँदै | Mechikali Daily
Posted By: Jibraj Chaliseon: June 04, 2019 In: breaking, slideshow, बिषेश, समाचार
बुटवल । बुटवलका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र र सबै बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले चक्रपथ निर्माण गरेको छ । यहाँका १९ वटै वडा र छिमेकका अरु स्थानीय तहसंगसमेतलाई सञ्जालमा जोड्ने गरि वाइपाससहितको चक्रपथ निर्माण भइरहेको छ ।
आउँदो दशैंसम्ममा नगर बस सञ्चालन गर्नेगरि चक्रपथ निर्माणको काम चलिरहेको छ । उपमहानगरका १९ वटै वडामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, सबै बस्तीलाई सहरसंग जोड्ने तयारी स्वरुप चक्रपथ निर्माण थालिएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
यो चक्रपथलाई बुद्धबल्लीको जितगढी हुँदै लुम्बिनी र विमानस्थलसम्मका सिधा सडकहरुसंगसमेत जोड्ने र आन्तरिक वाइपासहरुलाई पनि यहीँ सडक सञ्जालमा डोड्ने गरी निर्माण भइरहेको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
बस्ती तथा बजार क्षेत्र र खुला क्षेत्रहरुलाई जोड्दै निर्माण भइरहेको चक्रपथले बुटवलका पार्कहरु, खुला चौरहरु, शैक्षिक क्षेत्र, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु, कृषि फार्महरु, औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, खेलमैदानहरु, सामुदायिक तथा साझेदारी वनहरु र नदी तटका बस्तीहरुलाई सञ्जालमा जोड्ने गरि निर्माण भइरहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । यसका अतिरिक्त केही स्थानमा हरियालीसहितको पदमार्गसमेत बनाइने छ ।
४० किलोमिटर लम्बाईको चक्रपथले ऐतिहासिक सम्पदा बुटवल जितगढी किल्ला, पुरातात्विक सहरका रुपमा विकास गर्न लागिएको पुरानो बुटवल हुँदै तिनाउ र दानव वारीपारीका सबै क्षेत्रहरुलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने छ ।
गोलपार्कबाट सुरु हुने चक्रपथले पुरातात्विक सहरका रुपमा संरक्षण भइरहेको पारी बुटवल हुँदै ऐतिहासिक मणिमुकुन्द सेन उद्यान क्षेत्र, जितगढी हुँदै चुरेको फेँदीबाट जवई मैदानसम्म पुग्ने छ । गोलपार्क पुलचोकमा नयाँ पक्की पुल निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ भने त्यसबीचमा पर्ने विभिन्न ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण भइसकेका छन् । जवाई मैदानलाई बुटवलले प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम बनाइरहेको छ ।
जवई खेलमैदानमा पुगेको चक्रपथलाई मिलनपार्क हुँदै बुटवल ग्लोबल पीसपार्कसम्म पु¥याइने छ । यी दुबै यहाँका शान्ति र मनोरञ्जनका महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा विकास भएका पार्कहरु हुन् । मिलनपार्कलाई उपमहानगरकै नमुना पार्क बनाउनेगरी काम भइरहेको वडा नं. १२ का अध्यक्ष दुर्गा सुवेदीले बताए ।
नरैनापुरलाई बुद्धबलीको (बुद्ध खेल्ने, डुल्ने र हिंड्ने ठाउँ) महत्वपूर्ण ठाउँ र पशुपतिनाथ भन्दा पनि पुरानो धामका रुपमा लिइन्छ । यहाँ धाममा अध्यय्न केन्द्रसहितको भ्यू टावर बनाउने र त्यसलाई सिमसार क्षेत्र कपरकट्टी ताल (बैठौलियाको नरेश्वर ताल नाम प्रस्ताव गरिएको) सम्म जोडेर गुरुयोजना बनिरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
चक्रपथले नरेनापुर धाम र कपरकट्टी ताल हुँदै त्यहाँका पुराना बस्ती केद्ली डाँडा, हिरा चोक हुँदै फर्साटिकर रोडमा जोडिने छ । फर्साटिकर रोड बुटवल–बेलबास–बेथरी सडकमा जोडिएको विमानस्थल र लुम्बिनी जाने वाइपास सडक हो । यहीँ सडकले वडा नं. १३ को नुवाकोट गढी प्रवेशद्वार हुँदै अगाडि बढेको १३ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद पुनले बताए ।
यहाँका बस्तीमा सार्वजनिक यातायात पु¥याउने र त्यसका माध्यमबाट कृषि उपजको बजार विस्तार, बुटवलको भिडभाडलाई कम गर्ने विश्राम स्थलका रुपमा विकास गर्नका लागि चक्रपथ निर्माण गरिएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
फर्साटिकर रोडमा जोडिएको चक्रपथलाई बाझापुर, विनायकपुर, भाटा, मनोहरापुर, सातकुला हुँदै मोतिपुर चोकमा लगिएको छ । मोतिपुर पुरानो बस्ती र खेतीयोग्य क्षेत्र भएको ठाउँ हो । मोतिपुरदेखि झण्डापुर, हरिहरपुर, रानीगञ्ज हुँदै योगिकुटीको तिलोत्तमा घाट (मगरघाट) मा जोडिने छ । तिलोत्तमा घाटमा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
यहाँबाट योगीकुटीचोक हुँदै रामनगर पुगेको चक्रपथलाई आम्दा अस्पताल, शिवनरग वन क्षेत्रबाट हिलपार्क गेटसम्म पु¥याइएको छ । हिलपार्कलाई बुटवलले बुद्धपार्कका रुपमा विकास गरिरहेको छ । यहाँ विशाल बुद्धमुर्ती सहितको ध्यानकेन्द्र बनाउने तयारी स्वरुप डीपीआर बनाउने काम चलिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले जानकारी दिए ।
हिलपार्क जोड्दै अगाडि बढेको सडकले चन्द्रनगर, आदर्शनगर र लक्ष्मीनगरपनि जोड्ने छ । लक्ष्मीपार्कलाई गुरुयोजनासहित उच्च स्थानको विशेष पार्कका रुपमा विकास गर्न लागिएको वडा नं. ४ का अध्यक्ष टंक पराजुलीले बताए ।
चक्रपथको पहिलो चरणको कामका लागि ५० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यद्यपि नगर यातायात गुरुयोजना भने कम्तिमा डेढ अर्ब बराबरको छ । चक्रपथको हालसम्म ३० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको र ट्रयाक खोल्दै पिच र ग्राभेलका काम चलिरहेका छन् ।
करिब १२ वटा कल्भर्ट मध्ये छ वटाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । दुई ठूला नदीमा पुल निर्माण भइसकेका छन् भने सेमलारमा पुल निर्माणको काम चलिरहेको छ । कम्तीमा दुई वर्ष भित्रमा चक्रपथ निर्माण पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको उपमहानगरका योजना प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत ईन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले भने एउटै योजनामा दुई वटा सरकारको थोरै–थोरै बजेट लगाउनुभन्दा एउटै सरकारले सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने इच्छा देखाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
बुटवलको अलग्गै नगर यातायात गुरुयोजना
बुटवल उपमहानगरले नगर यातायात गुरुयोजना नै निर्माण गरेर चक्रपथ बनाउन बजेट छुटाएको थियो । हालसम्म ग्राभेल र पीचसमेत गरी करिब पाँच करोड बराबरको काम भइसकेको छ । यसमा जनसहभागितासमेत जोडिएको छ । चक्रपथ र पैदलपथको प्राविधिक अध्यय्न तथा परामर्शको काम नेष्ट र इकोकोड नामका कम्पनीका प्राविधिकहरुको सहकार्यमा भएको थियो ।
गुरुयोजनाका लागि २ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्मा बसपार्कदेखि विश्राम स्थल र ग्यारेजसम्मको योजना छ । एक बर्ष लगाएर यो नगर गुरुयोजना बनेको थियो । उपमहानगरपालिकाले दुई बर्षदेखि चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट छुट्याएर सडक निर्माणलाई तीब्रता दिएको छ । अबको कम्तिमा छ महिनामा धेरै स्थानमा नगर माइक्रो बस सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।
अघिल्लो आवमा उपमहानगरले एक करोड बजेट छुट्याएर सडक निर्माण गरेको थियो । चालु बर्ष उपमहानगरले वडा नम्बर १२, १३ मोतीपुर सेमलार क्षेत्रका लागि दुई करोड रुपैयाँ चक्रपथका लागि छुट्टाएको थियो । यसको काम अहिले भइरहेको छ । यसैगरि प्रदेश सरकारले बुटवल वडा नम्बर ११ र १३ का लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको थियो । उपमहानगरभित्र एक सय ९३ सडक रहेको र अधिकांश कालोपत्रे भइसकेको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख शिवनारायण शाहले जानकारी दिए ।